Football Khabar » कोपा अमेरिका : पराग्वे र कतार बराबरीमा रोकिए, अर्जेन्टिनालाई राहत !
कोपा अमेरिका : पराग्वे र कतार बराबरीमा रोकिए, अर्जेन्टिनालाई राहत !
ब्राजिमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलमा पराग्वे र पाहुना टोली कतार पहिलो खेलमा बराबरीमा रोकिएका छन् । गत राति भएको समूह ‘बी’को खेलमा दुवै टिम २–२ को बराबरमिा रोकिँदै अंक बाँडेका हुन् ।
खेलमा पराग्वेले २–० को सहज अग्रता लिएर पनि जोगाउन सकेन । उसले खेलको चौथो मिनेटमै पेनाल्टी गोलबाट अग्रता लिएको थियो । सो गोल ओस्कार कारडोजोले गरेका थिए । सोही गोलको मदतमा पराग्वेले पहिलो हाफमा १–० को लिड लियो ।
त्यसपछि दोस्रो हाफमा पनि पराग्वेले गोल थप्यो । उसका लागि खेलको ५६औं मिनेटमा डेर्लिस गोन्जालेले गोल गर्दै खेल २–० बनाए ।
तर, त्यसपछि अतिथि टोली कतारले खेलमा उकृष्ट पुनरागमन गर्यो । उसका लाािग खेलको ६८औं मिनेटमा अल्मोइज अलीले पहिलो गोल गरेका थिए ।
बराबरी गोलको खोजीमा रहेका कतारका लागि खेलको ७७औं मिनेटमा बोउआलेम खोउखीले गोल गर्दै खेल २–२ बनाए । त्यसपछि बाँकी समयमा दुवै पक्षबाट थप गोल नभएपछि खेल २–२ मा टुंगियो ।
यो बराबरीपछि समूह ‘बी’मा दुवै टिमले अंक बाँडेका छन् । अब पराग्वे १ अंकसहित दोस्रो र कतार समान १ अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ । कोलम्बिया ३ अंकसहित शीर्ष स्थानमा छ भने अर्जेन्टिना अंकविहीन हुँदै सबैभन्दा पुछारमा छ ।
यो बराबरीले पराजित टिम अर्जेन्टिनालाई थोरै भए पनि राहत मिलेको छ । यदि यस खेलमा कुनै टिमले स्पष्ट ३ अंक बटुलेको हो त्यो अर्जेन्टिनाका लागि अप्ठेरो अंक हुने थियो । तर, दुवै टिमले अंक बाँड्दा अर्जेन्टिनामाथि आगामी दुई खेलबाट नतिजा निकालेर क्वार्टरफाइनल जान केही सहज हुने भएको छ ।
प्रकाशित मिति १ असार २०७६, आईतवार २३:३२